Maalinta: Diseembar 7, 2017
Qiimaha sicir-dhimista ee nidaamka tareenka ee Bursa waa 13 Milyan TL
Duqa Magaalada Bursa Metropolitan Alinur Aktaş, qiimaha sanadlaha ee nidaamka tareenka ee degmada 13 million TL ayaa shaaciyay. Duqa Magaalada Bursa Alinur Aktaş, isagoo hor taagan kaamiradaha maalintii 34 ee booskiisa cusub [More ...]
295, oo ah dugsi sare iyo shahaadada koowaad ee jaamacadeed, ayaa waxaa ku dhawaaqay Agaasimaha Guud ee Tareenka Gobolka. Waxaa ka qalin-jabiyay dugsiga sare iyo shahaadada koowaad ee jaamacadda 'International Railways General Director' 295 [More ...]
Dib u dhiska ayaa ka bilowday saldhig tareen Guzelyurt ah
Howlaha dib u soo celinta tareenka tareenka ee Güzelyurt taariikhi ah, oo ka mid ah astaamaha Cyprus iyo Güzerlyurt, ayaa la bilaabay. Tallaabada la taaban karo ee dib u soo nooleynta iyo dib ula soo noqoshada Saldhigga Tareenka ee Güzelyurt ee “3. [More ...]
TCDD Taşımacılık A.Ş. Agaasinka Guud ee Magacaabista Waaxda Kheyraadka Bini'aadamka iyo Agaasinka Qeybta Kala-guurka ama Istanbul-Ankara-Izmir-Sivas-Malatya-Adana-Afyonkarahisar Adeegga Dayactirka Gawaarida shaqsi ahaan [More ...]
'Shirka Soo Kordhinta Magaalooyinka' ayaa looga doodi doonaa Magaala-weynta. Magaalada Antalya ee Magaalo Weyn iyo Magaalada Estate iyo Ururka Maalgashiga Maalgashiga ee 'GYODER' oo kaashanaysa 13-14 Diseembar 'Shirkii Kobcinta Magaalooyinka' ayaa la qaban doonaa. Dalxiiska ugu muhiimsan ee shirweynaha [More ...]
Akçaray Sekapark - Tartanka tareenka ayaa la qabtay
2017 oo ay leedahay Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli ayaa kordhineysa khadka tareenka Akçaray, kaas oo la siinayo muwaadiniinta bisha Agoosto. Xariiqda 2.2 kiiloo mitir ee Akçaray Tram, waxay ka bilaabmaysaa Isbitaalka Gobolka Seka oo ku fidsan ilaa Wadada Xeebta, [More ...]
Aksiceseddin Ship oo ku taal magaalada Iznik Lake!
Markabka "Akşemseddin Ship alın" wuxuu iibsaday Tur Blue Cruise olan kaas oo soo noolayn doona dalxiiska wabiga Lakeznik ee Bursa wuxuu raadinayaa deked ay ku magan galaan. Bisha Juun 2015 3 waxay abaabushaa safarro safar-wareeg ah oo udhaxeeya safaaradaha Orhangazi iyo İznik. [More ...]
Havza OSB oo bilaabaysa Dhismaha Dhismaha Dhuumaha
Kooxaha 'Sivas TCDD' waxaa sameyn doona Havza Organised Zone Zone ee loogu talagalay rakibaadda sagxadda iyo isgoysyada ayaa la baaray. Loading iyo isku xirka aaga Havza Aasaasiga ah [More ...]
Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha ee Sivas (STSO) oo hoos timaada hoggaanka Golaha Madaxweynayaashu, kana kooban madaxda ururrada aan dawliga ahayn, ayaa Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan la kulmay booqashada ka hor. Mudnaanta in laga codsado Sivas kulanka [More ...]
Shirkad Turki ah oo ku guuleysatay qandaraaska dhulka hoostiisa ee Bangkok, caasimada Thailand Bozankaya Gawaarida ayaa dhoofin doonta 22 metro metro sanadka soo socda. Markii ugu horreysay waxaa loo aasaasay shirkad R&D oo laga leeyahay Jarmalka Bozankaya Automotive, Turkiga [More ...]
Cusub cusub oo ka socda Burulaş ilaa Jaamacadda Metro
Isbedelka degmada Bursa Metropolitan Dowlada wuxuu dhashaa midhihii isbadalka. Burulaş wuxuu kordhiyay waqtiga sugitaanka laga bilaabo 2 ilaa 3 isagoo ku wareejistay arjiga tareenka ee madhan laga soo bilaabo Arabayatağı una wareego khadka jaamacadda Uludağ saacadaha subaxdii markii mitrooga si weyn loo isticmaalay. [More ...]
RayHaber 07.12.2017 Warbixinta Shirka
Iibsiga Adeegga Shaqaalaha Xargaha Barafka waxaa lagu iibsan doonaa Mashruuca Tareenka Qaranka ee Korantada Korantada Aluminium Alloy Qaab dhismeedka Alaabada Aluminium Istiraatiijiyada (TÜVASAŞ) Nidaamka Pantograph ee Mashruuca Dejinta Korantada Korantada Qaranka. [More ...]
Madaxweyne Aktas oo ku dhawaaqay Khariidadda Waddooyinka ee Meelaha ugu Weyn
Duqa Magaalada Bursa Alinur Aktaş, isagoo kaamiradaha hortooda maalinta loo xilsaaray 34'ün, Bursa, ka dhigaya magaalo sifiican loo heli karo ayaa soo jiiday khariidadda wadada ay shacabka la wadaageen. Waa la joojiyay, dib loo eegay [More ...]